Fortnite ညမ်းဂိမ္း:ရော် Xxx လိင်ဂိမ်းပလက်ဖောင်း
သင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြအတွက်နေရာတစ်ခုရဲ့အနိုင်ပေးနှင့်အတူတစ်ဦးလုံးဝတောက်ပ၏အစုအရည်ရွှမ်းညမ်းဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက် Fortnite? သေချာတာမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်၊သင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြတ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်၏နာမတော်အားဖြင့် Fortnite ညမ်းဂိမ်းများနှင့်အမ၏အလိုဆန္ဒ၊အဆိုပါစို့။သင်လိုအပ်သောအလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်လမ်းညွှန်ပြု။ ဒါကြှနျုပျတို့အကွောငျး:ကျနော်တို့အတည္ေဒီလူထု၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၉ နှင့်ပြီကနေခွန်အားအစွမ်းသတ္တိကိုအစဉ်အဆက်ကတည်းက။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများအတွက်ပတ်ပတ်လည်ရုံတစ်ခုတည်းပြက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်အတော်လေးခဲ့သည်ရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်အတွက်ဆှဂိမ္းစက်ဝိုင်းအခါတွန်းလာဖို့တွန်းပါတယ်၊ကျနော်တို့ပေးနိုင်သောအရာကိုအခြားသူများမဟုတ်:အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအစည်းအဝေးသင်လက်ရှိတွင်ပေါ်သင်၏လက်ကိုရနိုင်။ ပါကသဘာဝကျကျ၊ဤတစ်ပြက်-အချာအာရုံစူးစိုက်နှင့်အတူ Fortnite အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက။ သင်ရမယ့်နေအချို့၏အကောင်းဆုံးမြင်ရပတ်ပတ်လည်နှင့်ဟုတ်ကဲ့၊တပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံအဖို့သီးသန့်။, သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေရာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း၊မလိမ့်မည်ဟုထွက်ရှိပါတယ်မည်သူမဆိုအားပေးနိုင်လိမ့်သင်သည်တစုံတခုသောစကားမှအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်။ မှာထိုနေ့၏အဆုံး၊လူတွေလာပြီးသူတို့အဘယ်အရာကိုသူတို့သိလို–အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းထုတ်ထားကြောင်း့ပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ဒါကြောင့်သင်တို့ပြုချင်သတ္တိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်မြင်ရလျှင်သင်ရရှိရန်ကြာမြင့်သောအရာကိုကြာကြာရှင်သန်ထက် ၁၀ စက္ကန့်ခြင်းမရှိဘဲရတဲ့အခက်? စေဖို့စမ်းသပ်မှု!
ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအကြောင်းစဉ်းစားတာတော်တော်သတ္တိ၊နှင့်အချက်ကိုကြောင်းစိတ်အားပေးသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စမှဖြစ်ကောင်းသင်တို့သိရကြကုန်အံ့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့မဆိုအလေးအနက်စီးပွားရေးမှကြွလာသောအခါဤအကြောင်းအရွယ်ရောက်ဖျြော။ ဖုန္းေခၚမည္ကဘုရားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချပြီးခြင်းမပြုမီဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းကျွန်တော်ပေးရန်ရှိသည်င့်ပြန်ပြီးသွားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးများအတွက်အခမဲ့။ အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဟုယုံကြည်ထိုပိုသောသူဂိမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်း၊ပိုကောင်း။, သေချာတာပေါ့၊မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်နည်းလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းနိုင်သူ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည့်အခါသင်သည်တတ်နိုင်မယ့်အစားကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်လူထုလစာငွေချေအတွက်အနှစ် to၀ လာ? ကျနော်တို့မကြာခဏမိတ်ဖက်နှင့်အတူအမျိုးမျိုး၏နံပါတ်အမှတ်တံဆိပ်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်များအထွက်စစ်ဆေး၊နှင့်ဘေးဖယ်ကနေအနည်းငယ်ကြော်ငြာအတွင်း(အမည်မှသက်ဆိုင်ရာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်)၊Fortnite ညမ်းဂိမ္းကဒီမှာနေတာပါကြောင်းသေချာစေရန်ရတဲ့တပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။, ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာမရှိအနိုင်ရမှပေးဆောင်ပုံစံများ၊အချိန်မသော့ခတ်–ပဲကြီးမြတ်ဂိမ်းကစားဘယ်မှာ Fortnite နှင့်လိင်အဓိကအာရုံစူးစိုက်!
အရာအားလုံးကိုသင်အပေါ်ဒီနေရာမှာမြင်ရ Fortnite ညမ်းဂိမ်းများအတွက်ဖန်တီး-အိမ္၊ဆိုလိုတာကသင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတွေ့သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း။ ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်မယုံနိုင်လောက်အောင်လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတော်လေးအချိန်အတန်–ရိုးရိုးချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကတခြားသူတွေကိုဘယ်လိုသိတာဖန်တီးခြင်းကဲ့သို့သောတောက်ပသောခေါင်းစဉ်လူလိုကစားအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။, အရုပ်အားသာချက်မှကြွလာသောအခါအသီးသန့်ဒီမှာ၊နှင့်ကြီးစွာသောအစားလွန်းသောကြောင့်၊သင်ပါလိမ့်မယ်အဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိအမွမ်းများအတွက်လိုအပ်သောခေါင်းစဉ်များနှင့်အင်း–ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကန်-မြည်းကိုလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးရဖို့နောက်ကျောအဆိုပါဂိမ်းကစားချစ်ကြောင်း XXX ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အလိုအရကနေသူလူတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိ။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်အသံုးျပဳေျကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကိုတိုက်ရိုက်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်နှင့်အကြံပြုပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်၊ကြောင်းအမှန်တကယ်တိုးတက်ခြုံငုံအတွေ့အကြုံ။, ကျွန်တော်စုဆောင်းအများကြီးသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်အသုံးပြုစေသည့်အခါဒီဇိုင်းအသစ်ဂိမ်းများနှင့် patching ဟာင္း–စောင့်ရှောက်အသေးစိတ်စီး၊မိတ်ဆွေ! ကျနော်တို့လုံလောက်တဲ့မရနိုငျသင်ယောက်ျားတွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ။
ငါချင်ကြပါဘူးအဘွားနှင့်အတူတစ်မက်ထရစ်တန်သတင်းအချက်အလက်ဒီမှာ၊သို့သော်သဘောပေါက်ကျေးဇူးပြု Fortnite ညမ်းဂိမ်းများသည်ရာင်းဖို့လက်ခံသင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ပိုကောင်းဘာမျှမအဘို့ပြုမှအထက်သို့တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်အဘယ်အရာကိုသဘောတူသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းလမ်းပေးခြင်း၏သင်ရရှိဖို့သင်ဘာလိုချင်အဖြစ်ချည်နှောင်ပြီးပြည့်စုံဆှအောင်မြင်မှု၊ငါသံသယမရှိကြအားသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေအတွင်းအပြင်နှင့်ပြန်လာကြလိမ့်မည်များအတွက်နေ့တိုင်းအတူတူပင်၏ပိုထက်မြက်သောငါတို့သည်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်။, ဒါကြောင့်၊စိတျထဲမှာအတူ၊သင်ဆွဲခလုတ်နှင့်ပူးပေါင်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းအပေါ်အင်တာနက်ကို? ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချသင်ချစ်ကြတာပေါ့အဘယျသို့သင်ရှာ၊ဒါကြောင့်လက်ျာဘက်အရာလုပ်ဖို့၊လိုက်ခြင်းဖြင့်အခမဲ့အကောင့်နဲ့ရကုန်ဒီကားလမ်းပေါ်တွင်ပြသ! လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းတစ်လျှောက်:အခုသွားထုတ်စစ်ဆေးအပြည့်အဝအ Fortnite ညမ်းဂိမ်းခေါင်းစဉ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ချွတ် jerking!